Showing १४१-१५० of ४,९०३ items.
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि उच्च अङ्कले घटेको छ । लगातार ओरालो लाग्दै गएको नेप्सेमा आज देखिएको गिरावट पनि उच्च अङ्कको हो ।झण्डै तीन हजार ३०० को बिन्दु नजिक पुगेको नेप्से परिसूचक आजसम्म आइपुग्दा ओरालो लागेर दुई हजार ६१५.४० मा ओर्लिएको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेनसेटिभ परिसूचक ११.४२ अङ्कले घटेर ४९४.९१ मा ओर्लिएको छ । नप्सेको ओरालो यात्रासँगै कारोबार रकमसमेत घटेको छ ।कूल २१८ कम्पनीको एक करोड ३० लाख ३४ हजार ८२८ कित्ता शेयर पाँच अर्ब ७४ करोड ५४ लाख ८८ हजार १७९ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । मङ्गलबारको कारोबारपछि बजार पूँजीकरणसमेत घटेर ३६ खर्ब ६१ अर्ब चा
नौ कृषि फर्म प्रारम्भिक छनौटमा
पथरीशनिश्चरे / नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका लागि मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरका ९ वटा कृषि फर्मको प्रारम्भिक छनौट गरिएको छ । इनोभेसन आयोजनाको अनुदान वितरणका लागि नगरबाट पेश भएका परियोजनामध्ये प्रारम्भिक छनौटमा परेका ९ फर्महरुको अनुगमन् गरिएको छ । आयोजनाका डा. सुशील अधिकारी, योगेन्द्रप्रसाद शर्मा, लेखनाथ खरेल तथा नगरको पशुपंक्षी शाखा प्रमुख हेमचन्द्र दहालको टोलीले फर्मको अनुगमन् गरेको हो । बाख्रामा वडा नम्बर २ बाट प्रेमा श्रेष्ठ, ३ बाट रामप्रसाद खनाल, ५ बाट मनमाया पाण्डेको फर्म प्रारम्भिक छनौटमा परेको छ । त्यस्तै, दुधका लागि वडा नम्बर ३ बाट चन्द्रिका सापकोटा, भला रेग्मी,
नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला तीन सयले घटेको छ । छापावाल सुन सोमबार प्रतितोला ८९ हजारमा ३०० मा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ८९ हजार तोकिएको छ । त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ८८ हजार ५५० कायम गरिएको छ । तेजाबी सुन सोमबार प्रतितोला ८८ हजार ८५० मा कारोबार भएको थियो ।महासङ्घका अनुसार चाँदीको मूल्य सोमबारको तुलनामा आज प्रतितोला पाँचले घटेको छ । सोमबार प्रतितोला एक हजार १६० मा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज प्रतितोला एक हजार १५५ तोकिएको छ ।
प्रेस युनियन सुनसरीद्वारा बिमाबापतको भुक्तानी
धरान । नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीले सञ्चारकर्मी रमेश राई साङ्गेनलाई दुर्घटनाबापतको रकम प्रदान गरेको छ । युनियनले ३ सय सञ्चारकर्मीको अजोड इन्स्यूरेन्ससँग बिमा गरेको थियो । विजयपुर एफएममा कार्यरत राईलाई दुर्घटनाबापतको ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ सोमबार हस्तान्तरण गरिएको छ । सुनसरीका अग्रज पत्रकार गिरिराज आचार्य र नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष जनकऋषि राईले संयुक्त रूपमा रकम प्रदान गरे । यसअघि पत्रकार विराट अनुपमलाई दुर्घटनाबापतको रकम प्रदान गरिएको छ । युनियनले प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाका युनियन अध्यक्षसहित ३१४ जनाको दुर्घटना बिमा गरेको युनियन सुनसरीका सभापति पवनविवश अधिकारीले जानका
आज सुनको मूल्य नेपाली बजारमा प्रतितोला ३०० ले बढेको छ । छापावाल सुन आइतबार प्रतितोला ८९ हजारमा कारोबार भएको थियो भने तेजाबी सुन प्रतितोला ८८ हजार ५५० मा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ८९ हजार ३०० र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ८८ हजार ८५० तोकिएको छ ।महासङ्घका अनुसार चाँदीको मूल्य आइतबारका तुलनामा आज प्रतितोला १० ले बढेको छ । आइतबार प्रतितोला १ हजार १५० मा कारोबार भएको चाँदी आज प्रतितोला १ हजार १६० तोकिएको हो ।
वराहका परिकल्पनाकारको जन्मजयन्तीमा रक्तदान
धरान । वराह ग्रुप अफ कम्पनीका परिकल्पनाकार संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय इन्द्रकुमार लामिछाने विश्वकर्माको ६४ औं जन्मजयन्तीमा रक्तदान कार्यक्रम गरिने भएको छ । असोज १३ गते धरान–८ स्थित वराह ग्रुपको नयाँ भवनमा रक्तदान कार्यक्रम गरिने शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘रक्तदान जीवनदान’ भन्ने मूल नाराका साथ रक्तदान कार्यक्रम गर्न लागेको जनाएको छ । धरानलाई रक्तदाताको सहरका रूपमा चिनाउन भूमिका खेल्दै आएको वराहले यसपटक पनि रक्तदान कार्यक्रम गरेर जन्मजयन्ती मनाउन लागेको हो । २०६७ सालदेखि रक्तदान कार्यक्रम सुरु गरेको वराहले २०७४ सालमा १ हजार ५६ युनिट रगत सङ्कलन गर्दै देशभरिमा दोस्रो बनेको थियो
दमकस्थित हिमशिखर एग्रो एन्ड हर्व रिसर्च सेन्टरले मेगा बैंकसँगको सहकार्यमा क्रेडिट कार्ड किसानलाई वितरण गरेको छ । किसानका समस्यालाई ध्यानमा राख्दै प्रारम्भमा पाँच किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण गरेको एग्रोका अध्यक्ष धुव्रप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । एग्रोले किसानलाई डिजिटल कृषि प्रणालीमार्फत सहज तथा सहुलियत रुपमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ कार्ड वितरण गरेको उनले बताए । एग्रोले आज आयोजित कार्यक्रममा किसानलाई वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी जानकारीसमेत दिएको छ । कार्यक्रममा दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओली, एग्रोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश घिमिरे, मेगा बैंकका पुण्यप्रसाद खनि
भारतबाट सुनसरीमा दुई महिनामै ८० करोड बढीको आयात, निर्यात भने शून्य
सुनसरी । सुनसरी भन्सार कार्यालय हुँदै चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनाको अवधिमा ८० करोडभन्दा बढीको विभिन्न सामान आयात भएको छ । सुनसरी भन्सार कार्यालय सेतुबन्ध कोसी ब्यारेजको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को साउनदेखि भदौ मसान्तसम्म ८२ करोड ५० लाखभन्दा बढीको विभिन्न सामान आयात भएको हो । सुनसरी भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी आलु, प्याज, चामल, मकै, भुस, धान आयात भएको छ । सुनसरी हुँदै साउन महिनामा भारतबाट १० करोड ९३ लाख ६३ हजार बराबरको आलु आयात भएको छ भने प्याज ६ करोड ३५ लाख ९२ हजार बराबरको आयात भएको देखिन्छ । यसैगरी भारतबाट ८ करोड ३७ लाख ४० हजार
धरान । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट खारेज गर्दै शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको संशोधित बजेट दुवै सदनमा पारित भएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले १६ अर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । उक्त बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै देउवा सरकारले बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटलाई अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गर्दै नयाँ बजेट ल्याएका थिए । राष्ट्रियसभाको बिहीबार बसेको बैठकले बजेट विधेयक पारित गरेसँगै दुवै सदनबाट बजेट पारित भएको हो । सभामु
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले बढेको छ । शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक २.७० अङ्कले बढेर दुई हजार ८१९.६५ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १.९३ अङ्कले बढेर ५३०.०२ मा उक्लिएको छ । कूल २२८ कम्पनीको एक करोड ५७ लाख १४ हजार २६६ कित्ता शेयर रु सात अर्ब ७२ करोड ६३ लाख ७१ हजार २९ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । बिहिबारको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण रु ३९ खर्ब ४७ अर्ब १५ करोड सात लाख ९० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहमध्ये आज दुई उपसमूहको शेयर उकालो लाग्यो भने ११ उपसमूहको शेयर भने ओर